Rugby - FMR/DHL : Saika nanao pao-droa ny Ecole Privée Nirina
Norombahin’ny ekipan’ny Ecole Privée Nirina, avy etsy Ivandry, nisolo tena an’I Frantsa ny amboara eran-tany teo amin’ny rugby…
… izay natokana ho an’ny sekoly teto Antananarivo, ho an’ny sokoajy “minims”, teny amin’ny kianjan’I Malacam Antanimena, omaly.
Ny Lycée Andoharanofotsy, izay nitondra ny anaran’I Irlande, no resin’izy ireo teo amin’ny lalao famaranana tamin’ity hetsika fampahafantarana ny fiadiana ny amboara eran-tany hatao any Nouvelle Zélande, niarahan’ny federasiona malagasin’ny rugby sy ny orinasa DHL ity.
Tamin’ny alalan’ny antsapaka no nifantenana izay nandresy tamin’ity satria nisaraka ady sahala 3 no ho 3 izy ireo.
Ny CDA Andohatapenaka, izay nisolo tena ny ekipa japoney, kosa no nivoaka ho mpandresy nazava teo amin’ny sokajy “cadet”, tamin’ny alalan’ny isa 3 no ho 1 nanoloana an’I Italie, izay anarana noentin’ny ekipan’ny Ecole Privée Nirina ihany.
“Ireto ekipa cadet ireto no tena nantenaina satria naharitraritra ny fanazaran-tenan’izy ireo, saingy azo heverina ho nanao kinanga ihany izy ireo”, hoy I Eric Sefo, mpanazatra ny ekipan’ny Ecole Privée Nirina Ivandry.
Hitohy amin’ny alarobia ho avy izao eny amin’ny kianjan’I Malacam Antanimena ny fifaninanana, saingy ireo sekolin’ny rugby eto Analamanga kosa no hiatrika izany hetsika fampahafantarana ny Mondial 2011 izany.